Burcad-badeed la geeyey Somaliland iyo Puntland
Home Somali News Burcad-badeed la geeyey Somaliland iyo Puntland
17 Maxaabiis burcad-badeed Soomaali ah oo ku xidhnaa jeelasha jaziiradda Seychelles ayaa loo gudbiyay Somaliland iyo Puntland. 12 maxbuus ayaa shalay iyo maanta loo gacan galiyay Soomaaliland halka 5 kalena maanta loo gudbiyay Puntland.
Maxaabiistan ayaa qaarkood lagu xukummay xukunno xabsi ah u dhaxeeya 8 ilaa 24 sannadood, kuwaasoo muddada xabsigooda ku dhamaysan donna jeelasha Somaliland iyo Puntland
Maxaabiistan burcad-badeeda Sooamalida ayaa lasheegay in horay loogu qabtay iyagoo ku guda jira falal kala duwan oo burcad-badeednimo ah waxaana looq aaday jasiirada Seychelles halkaasoo lagu soo xukumay xarig mudadoodu kala duwantahay,
Inkastoo soo celinta maxaabiistaan dalab kayimid dhinacooda hadana waxaa meesha ka marneen Seychelles ay lagaartay Somaliland iyo Puntland, sidaasi darteedna loogu haynayo xabsiyadooda.
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa sheegay in burcad-badeeda Soomaalida ay ku dhowaad 20 dal oo dibadda ka ah Soomaaliya oo ay Seychelles kamid tahay, marka qaar kamid ahna dib loo soo celiyo ay faa’iido utahay iyaga iyo qoysaskoodaba.
“Burcad-badeeda wadamada shisheeyaha ku xiran 20 dal oo ay Soomaliya kamid taheey ku xiranyihiin, 19 dal oo dibadda ah ayayna ka’imaan doonaan insha alaah waxana arintaas uyeelnay arimo bini’aadanimo, darted oo ah marka ugu horeeyso eheladooda, caruurtooda iyo xaasaskooda ineey usoo dhowaadaan” ayuu yiri madaxweyne faroole.
Somaliland ayaa ilaa iyo hadda lageeyay 29 kamid ah maxaabiista burcad-badeeda oo 12kii ugu danbeeyay 9 kamid ah ay shalay kadageen magaalada Hargaysa 3kamid ahna lageeyay Puntland.
Sida uu sheegayo wasiirka cadaalada Somaliland Xuseen Axmed Caydiid “12 maxbuus beey doowlada Seychelles nasoo weeydiisatay inaan kala wareegno maxaabistan, iyagoona ku saleeynayay codsi ay maxaabiistaan laftoodu ay codsadeen in Somaliland ku dhamaystaan mudada uga hartay xukunkooda, dabadeedna masuuliyiin Soomaaliland baa halkaan katagay si ay suoo hubiyaan codsiga maxaabiista ku xiran xabsiyada Seychelles” ayuu yiri wasiirka cadaalada Somaliland.
Wasiirka cadaalada Somaliland ayaa mar alweydiiyay ineey dhici karto Qatar ama aargoosi uga yimaada burcadbadeeda Soomaalida iyagoo ka jawaabaya maxaabiista halkaas uga xiraan ayaa wasiirka waxa uu ku jawaabay “dee Somaliland wixii burcad-badeed ah ee badaheeda soogala ineey tallaabo kaqaado xaq beey uledahay, xeer beeyna uleedahay wax diidayana majiraan”.
Maxaabiistan burcad-badeeda Soomaalida ayaa si weyn ugu riyaaqay markii ay dib ugu soo laabteen dalkooda inkastoo ay xabsi kusii jiri doonaan inta uga harsan xukunkooda. Talaabadaan ayay caalamku u arkaan in lagu hakin karo burcad-badeeda Soomaalida oo waayahaan danbe looga caagay agagaarka biyaha Soomaaliya.